Night Cream အမျိုးအစား ဘယ်နှစ်မျိုးရှိလဲ? ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တာကို ဘယ်လို ရွေးချယ်ကြမလဲ? - For her Myanmar
သေချာဖတ်ပြီးမှ ဝယ်နော်။ မသိဘူးဝယ်မယ်ဆိုပြီး အကုန်ဆွဲချမလာနဲ့ 😛
မတွေ့ရတာ အင်မတန်မှကြာလှပြီမို့ လွမ်းနေကြရဲ့လားယောင်းတို့ရေ… နှင်းကဒီဘက်ရုံးမှာ အလုပ်တွေအရမ်းများနေတာမို့ စာရေးတဲ့ဘက်ကို သိပ်မလှမ်းနိုင်ဖြစ်နေလို့ ယောင်းတို့ကိုပစ်ထားသလို ဖြစ်သွားရင် ဒီဆောင်းပါးလေးနဲ့ ချော့လိုက်ပါတယ်လို့။ ဒီနေ့ဆောင်းပါးလေးထဲမှာတော့ ယောင်းတို့လည်းသိချင်နေလောက်မယ့် ညလိမ်းခရင်မ်လေးအကြောင်းကို တင်ဆက်ချင်ပါတယ်ရှင်။ ကဲ ဒါဆိုဆက်ပြီးဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်။
ဘယ်အမျိုးအစား ဘာညာဆိုတာမသွားခင်မှာ ညလိမ်းခရင်မ်ဆိုတာဘာလဲ ဘာညာအနေအထားကို အရင်ဆုံး လေ့လာကြည့်ကြမယ်လေနော်။ နှင်းတို့ရဲ့မျက်နှာမှာရှိတဲ့ ဆဲလ်လေးတွေကအသစ်မွေးဖွားတာတွေ၊ သေသွားတဲ့ဆဲလ်အဟောင်းတွေက အရေပြားပေါ်တက်လာတာတွေ၊ ဆဲလ်လေးတွေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲတာတွေ စသည်ဖြင့် ဆဲလ်ပြောင်းလဲမှုအဆင့်ဆင့်တွေက ညဘက်မှလုပ်ဆောင်မှု အားပိုကောင်းပါတယ်။ (ဒါကြောင့် ညဘက်ကို စောစောအိပ်လို့ပြောတာပေါ့) ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ကိုယ့်အတွက်တကယ်ထိရောက်မယ့် Skincare မျိုးလိမ်းပေးရင် အသားအရေအတွက်အရမ်းကောင်းတာမို့ Night Cream လို့ခေါ်တဲ့ ညလိမ်းခရင်မ်လေးတွေက အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ ဆိုတော့ကား Night Cream ထဲမှာဆိုရင်…
ရိုးရိုး Night Cream (ရိုးရိုးညလိမ်းခရင်မ်)
ဒါကတော့ ငပျော်တကင်း (ငပျင်း) လေးတွေအတွက်ပါနော်။ ဒီလိုခရင်မ်ထဲမှာဆိုရင် အသားအရေထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ တိုနာ၊ နို့ရည်၊ ရေဓာတ်ဖြည့်ခရင် စသည်ဖြင့် ပုံမှန်လိမ်းနေကျ စကွင်းကဲတွေပါဝင်ပြီး တစ်မျိုးတည်းနဲ့ အာနိသင်ပေါင်းစုံကို တပြိုင်နက်တည်းရနိုင်ပါတယ်။ ဆိုပေမဲ့လည်း အစုံသုပ်တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း အုတ်ရောရောကျောက်ရောရောနဲ့ အရမ်းထိရောက်မှာမျိုးမဟုတ်တာမို့ အခုမှ စကင်းစကဲမယ့် ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေအတွက်လောက်ပဲ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
Related Article >>> ပရိုမိုးရှင်းပစ္စည်းထဲမှာမှ အကောင်းဆုံးပစ္စည်းကို ဘယ်လိုရွေးထုတ်ကြမလဲ?
Sleeping Pack or Sleeping Mask (Sheet Mask ကဲ့သို့အစွမ်းထက်သော ညလိမ်းခရင်မ်)
သူလေးကတော့ ယောင်းတို့နဲ့ နည်းနည်းလေးစိမ်းမယ်ထင်တယ်။ ဒီညလိမ်းခရင်မ်လေးက သက်ဆိုင်ရာအာနိသင် (ဥပမာ ရေဓာတ်ဖြည့်ချင်တာမျိုး၊ Anti-Aging လို အရွယ်မတိုင်ခင်အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးခြင်း (သို့) အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကိုကုသပေးခြင်း) စတာတွေကို အမြင့်ဆုံးပေးစွမ်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ (ဥပမာ ယောင်းက Moisturizing Sleeping Pack ကိုညဘက်လိမ်းအိပ်မယ်ဆိုရင် မနက်ရောက်တဲ့အခါ ရေဓာတ်အပြည့်နဲ့လန်းဆန်းနေတဲ့မျက်နှာလေးကို တွေ့ရမှာပါ။) ဒီခရင်မ်လေးကတော့ ရိုးရိုးလိုမျိုး လုပ်ဆောင်ချက်အများကြီးမပါပေမဲ့ တစ်ခုတည်းကိုပဲ ထိရောက်မှုအကောင်းဆုံးရအောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာမို့ ကိုယ့် Skin အကြောင်းကောင်းကောင်းသိပြီး လိုအပ်တာကို တိတိကျကျဖြည့်ချင်တဲ့ ယောင်းတွေအတွက် ဒါလေးကသင့်တော်ပါတယ်။
Nourishing Cream (လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်ကိုပြန်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်တဲ့ ညလိမ်းခရင်မ်)
နှင်းအပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ ညဘက်မှာမှ ဆဲလ်တွေရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်က အမြင့်ဆုံးတက်တာမို့ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ အာဟာရဓာတ်များများပါတဲ့ ခရင်မ်မျိုးလိမ်းပေးတာက ကိုယ့်အသားအရေရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကို အားပေးတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီလိုမျိုးခရင်မ်ကတော့ အသားအရမ်းခြောက်ပြီး ကြမ်းတမ်းနေတဲ့ ယောင်းလေးတွေ၊ မျက်နှာက မွဲခြောက်ခြောက်ဖြစ်နေတဲ့ ယောင်းလေးတွေနဲ့ ပိုပြီးသင့်တော်ပါတယ်။ (အသားခြောက်သူတွေနဲ့သင့်တော်တယ်ဆိုပေမဲ့ ညဘက်လိမ်းမှာမို့ အဆီပြန်သမားတွေလည်း လိမ်းပေးလို့ရပါတယ်နော်။)
Related Article >>> ညိုမည်းနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားတွေ ပန်းနုသွေးခြယ်လာစေဖို့ ဒီနည်းလေးတွေ သုံးကြည့်ပါ။
ဒါလေးတွေကတော့ ယေဘုယျအားဖြင့် ဈေးကွက်ထဲမှာ အတွေ့များတဲ့ Night Cream လေးတွေပေါ့။ ပုံမှန်သုံးနေကျ တိုနာ၊ နို့ရည်၊ ရေဓာတ်ဖြည့်ခရင်မ် လိမ်းလည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့ အသားအရေကိုတစ်ဆင့်မြှင့်ပြီးထိန်းသိမ်းချင်တဲ့ ယောင်းလေးတွေ၊ သက်လတ်ပိုင်းက ယောင်းလေးတွေကတော့ ဒီလိုမျိုးခရင်မ်လေးတွေကို သုံးပေးသင့်ပါတယ်နော်။ ဒါမှလည်း အရွယ်တင်နုပျိုပြီး အမြဲလှနေနိုင်မှာပေါ့။ ဒီ Night Cream ဆောင်းပါးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးချင်တာရှိရင်လည်း မင်မင်တို့ရဲ့ Chat box ကနေတစ်ဆင့် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နော်။ နှင်းဖြေပေးပါ့မယ်လို့။ အခုတော့ တာ့တာ!!!
သခြောဖတျပွီးမှ ဝယျနျော။ မသိဘူးဝယျမယျဆိုပွီး အကုနျဆှဲခမြလာနဲ့!!!
မတှရေ့တာ အငျမတနျမှကွာလှပွီမို့ လှမျးနကွေရဲ့လားယောငျးတို့ရေ… နှငျးကဒီဘကျရုံးမှာ အလုပျတှအေရမျးမြားနတောမို့ စာရေးတဲ့ဘကျကို သိပျမလှမျးနိုငျဖွဈနလေို့ ယောငျးတို့ကိုပဈထားသလို ဖွဈသှားရငျ ဒီဆောငျးပါးလေးနဲ့ ခြော့လိုကျပါတယျလို့။ ဒီနဆေ့ောငျးပါးလေးထဲမှာတော့ ယောငျးတို့လညျးသိခငျြနလေောကျမယျ့ ညလိမျးခရငျမျလေးအကွောငျးကို တငျဆကျခငျြပါတယျရှငျ။ ကဲ ဒါဆိုဆကျပွီးဖတျကွညျ့ရအောငျနျော။
ဘယျအမြိုးအစား ဘာညာဆိုတာမသှားခငျမှာ ညလိမျးခရငျမျဆိုတာဘာလဲ ဘာညာအနအေထားကို အရငျဆုံး လလေ့ာကွညျ့ကွမယျလနေျော။ နှငျးတို့ရဲ့မကျြနှာမှာရှိတဲ့ ဆဲလျလေးတှကေအသဈမှေးဖှားတာတှေ၊ သသှေားတဲ့ဆဲလျအဟောငျးတှကေ အရပွေားပျေါတကျလာတာတှေ၊ ဆဲလျလေးတှေ ပွုပွငျပွောငျးလဲတာတှေ စသညျဖွငျ့ ဆဲလျပွောငျးလဲမှုအဆငျ့ဆငျ့တှကေ ညဘကျမှလုပျဆောငျမှု အားပိုကောငျးပါတယျ။ (ဒါကွောငျ့ ညဘကျကို စောစောအိပျလို့ပွောတာပေါ့) ဒီလိုအခြိနျမြိုးမှာ ကိုယျ့အတှကျတကယျထိရောကျမယျ့ Skincare မြိုးလိမျးပေးရငျ အသားအရအေတှကျအရမျးကောငျးတာမို့ Night Cream လို့ချေါတဲ့ ညလိမျးခရငျမျလေးတှကေ အငျမတနျမှအရေးကွီးပါတယျ။ ဆိုတော့ကား Night Cream ထဲမှာဆိုရငျ…
ရိုးရိုး Night Cream (ရိုးရိုးညလိမျးခရငျမျ)
ဒါကတော့ ငပြျောတကငျး (ငပငျြး) လေးတှအေတှကျပါနျော။ ဒီလိုခရငျမျထဲမှာဆိုရငျ အသားအရထေိနျးသိမျးဖို့အတှကျ လိုအပျတဲ့ တိုနာ၊ နို့ရညျ၊ ရဓောတျဖွညျ့ခရငျ စသညျဖွငျ့ ပုံမှနျလိမျးနကြေ စကှငျးကဲတှပေါဝငျပွီး တဈမြိုးတညျးနဲ့ အာနိသငျပေါငျးစုံကို တပွိုငျနကျတညျးရနိုငျပါတယျ။ ဆိုပမေဲ့လညျး အစုံသုပျတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုငျး အုတျရောရောကြောကျရောရောနဲ့ အရမျးထိရောကျမှာမြိုးမဟုတျတာမို့ အခုမှ စကှငျးစကဲမယျ့ ဆယျကြျောသကျလေးတှအေတှကျလောကျပဲ အဆငျပွပေါလိမျ့မယျ။
Related Article >>> ပရိုမိုးရှငျးပစ်စညျးထဲမှာမှ အကောငျးဆုံးပစ်စညျးကို ဘယျလိုရှေးထုတျကွမလဲ?
Sleeping Pack or Sleeping Mask (Sheet Mask ကဲ့သို့အစှမျးထကျသော ညလိမျးခရငျမျ)
သူလေးကတော့ ယောငျးတို့နဲ့ နညျးနညျးလေးစိမျးမယျထငျတယျ။ ဒီညလိမျးခရငျမျလေးက သကျဆိုငျရာအာနိသငျ (ဥပမာ ရဓောတျဖွညျ့ခငျြတာမြိုး၊ Anti-Aging လို အရှယျမတိုငျခငျအိုမငျးရငျ့ရျောခွငျးကို ကာကှယျပေးခွငျး (သို့) အိုမငျးရငျ့ရျောခွငျးကိုကုသပေးခွငျး) စတာတှကေို အမွငျ့ဆုံးပေးစှမျးနိုငျတာဖွဈပါတယျ။ (ဥပမာ ယောငျးက Moisturizing Sleeping Pack ကိုညဘကျလိမျးအိပျမယျဆိုရငျ မနကျရောကျတဲ့အခါ ရဓောတျအပွညျ့နဲ့လနျးဆနျးနတေဲ့မကျြနှာလေးကို တှရေ့မှာပါ။) ဒီခရငျမျလေးကတော့ ရိုးရိုးလိုမြိုး လုပျဆောငျခကျြအမြားကွီးမပါပမေဲ့ တဈခုတညျးကိုပဲ ထိရောကျမှုအကောငျးဆုံးရအောငျ လုပျဆောငျပေးနိုငျတာမို့ ကိုယျ့ Skin အကွောငျးကောငျးကောငျးသိပွီး လိုအပျတာကို တိတိကကြဖြွညျ့ခငျြတဲ့ ယောငျးတှအေတှကျ ဒါလေးကသငျ့တျောပါတယျ။
Nourishing Cream (လိုအပျတဲ့အာဟာရဓာတျကိုပွနျဖွညျ့တငျးပေးနိုငျတဲ့ ညလိမျးခရငျမျ)
နှငျးအပျေါမှာပွောခဲ့သလိုပဲ ညဘကျမှာမှ ဆဲလျတှရေဲ့လုပျဆောငျခကျြက အမွငျ့ဆုံးတကျတာမို့ ဒီလိုအခြိနျမြိုးမှာ အာဟာရဓာတျမြားမြားပါတဲ့ ခရငျမျမြိုးလိမျးပေးတာက ကိုယျ့အသားအရရေဲ့လုပျဆောငျခကျြကို အားပေးတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ ဒီလိုမြိုးခရငျမျကတော့ အသားအရမျးခွောကျပွီး ကွမျးတမျးနတေဲ့ ယောငျးလေးတှေ၊ မကျြနှာက မှဲခွောကျခွောကျဖွဈနတေဲ့ ယောငျးလေးတှနေဲ့ ပိုပွီးသငျ့တျောပါတယျ။ (အသားခွောကျသူတှနေဲ့သငျ့တျောတယျဆိုပမေဲ့ ညဘကျလိမျးမှာမို့ အဆီပွနျသမားတှလေညျး လိမျးပေးလို့ရပါတယျနျော။)
Related Article >>> ညိုမညျးနတေဲ့ နှုတျခမျးသားတှေ ပနျးနုသှေးခွယျလာစဖေို့ ဒီနညျးလေးတှေ သုံးကွညျ့ပါ။
ဒါလေးတှကေတော့ ယဘေုယအြားဖွငျ့ ဈေးကှကျထဲမှာ အတှမြေ့ားတဲ့ Night Cream လေးတှပေေါ့။ ပုံမှနျသုံးနကြေ တိုနာ၊ နို့ရညျ၊ ရဓောတျဖွညျ့ခရငျမျ လိမျးလညျးအဆငျပွတေယျဆိုပမေဲ့ အသားအရကေိုတဈဆငျ့မွှငျ့ပွီးထိနျးသိမျးခငျြတဲ့ ယောငျးလေးတှေ၊ သကျလတျပိုငျးက ယောငျးလေးတှကေတော့ ဒီလိုမြိုးခရငျမျလေးတှကေို သုံးပေးသငျ့ပါတယျနျော။ ဒါမှလညျး အရှယျတငျနုပြိုပွီး အမွဲလှနနေိုငျမှာပေါ့။ ဒီ Night Cream ဆောငျးပါးလေးနဲ့ပတျသကျပွီး မေးခငျြတာရှိရငျလညျး မငျမငျတို့ရဲ့ Chat box ကနတေဈဆငျ့ မေးမွနျးနိုငျပါတယျနျော။ နှငျးဖွပေေးပါ့မယျလို့။ အခုတော့ တာ့တာ!!!
Tags: cell, night cream, renewal, Routine, skincare